Shina: Tantara ratsin’ny resaka akoho mitsindrona ‘hormone’ aroson’ireo orinasa ‘Fast Food’ maro rantsana erantany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Novambra 2019 6:10 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Italiano, polski, Português, македонски, русский, 日本語, English
Vao haingana no naboraky ny fahitalavi-panjakana fa raha kely indrindra dia roa amin'ireo mpamatsy akoho an'ireny orinasa maro rantsana manolotra sakafo vita haingana ireny, amerikàna, japôney ary taioanezy, no mamahana ny akohon-dry zareo aminà hormona tafahoatra sy karazana antiobiôtika 18, mba hiompiana ‘akoho anaty fotoana fohy’ izay miainga amin'ny 30 gr ka lasa 3,5 kg ao anatin'ny 40 andro.
KFC sy McDonalds avy any Etazonia, Yoshinoya avy ao Japàna ary ny Yonghe King avy ao Taiwan ireo orinasa voasaringotra amin'ity tantara ratsy ity.
Ankehitriny, i Shina no tsena goavana indrindra ho an'ny indostrian'ny sakafo tonga dia vonona. Ny KFC izay anisan'ny ao anatin'ny vondrona Yum, izay mahavita mahazo ny 44% amin'ny vola matiny ao Shina amin'izao fotoana izao, ary lasa ho ny lasibatra voalohany indrindra amin'ity tantara ratsin'ny akoho sesehana hormona ity. Araka ny tatitra iray an'ny masoivoho momba ny fiarovana ara-tsakafo ao Shanghai [teny shinoa, zh], teo anelanelan'ny 2010 sy 2011, tamin'ireo santionan-tsakafo 19 nomen'ny Yum!, valo no tsy nahafeno ny valin'ny fitsapàna momba ny fiarovana ara-tsakafo noho izy ireo misy antibiôtika.
Zon'ny biby; sary an'ny mpampiasa flickr, Shira Golding (CC: BY-NC)
Satria ry zareo shinoa efa zatra aminà tantara ratsy isankarazany momba ny resaka sakafo, sorena ny ankamaroan-dry zareo, tamin'ny ankapobeny. Mahazatra ny mahita fanamarihana manebaka [zh] toy ireto manaraka ireto :
美丽人生2673263427：Tena nanana vintana aho. Efa nihinana ny hena misy ractopamine, ny ronono mifangaro mélamine, vokatra avy aminà lavaka tadin-kiraro efa nampiasaina, ny fanafody sandoka, ny atody voatrolombelona, ny akoho terena hitombo haingana, ny divay feno akora plastika … Efa mahazatra ahy ireo vokatra rehetra feno akora mampididoza. Eo am-piandrasana poizina misimisy kokoa mba hampitsahatra ny fanànako vintana amin'ny farany.
库 洪哈密瓜：Amin'ny hoavy, raha toa marary isika, tsy mila mividy fanafody intsony, fen'akoho iray dia mahavita azy.
Satria voasaringotra amin'ilay tantara ratsy ireo orinasa vahiny maro rantsaha mpanao sakafo vita malaky, izay heverina ho toy ny azo itokiana amin'ny resaka fiarovana ara-tsakafo raha miohatra amin'ireo toerampisakafoana efa eo an-toerana, misy amn'ireo shinoa sasany mpaneho hevitra no nanararaotra ilay fotoana mba hamelezana ireo marika vahiny. Mifanindran-dàlana amin'izay, ny hafa mamaly hoe ireo manampahefana tomponandraikitra no tokony homena tsiny. Ito ambany io ny fantina iray avy amin'ireo fanehoankevitra [zh] notsongaina avy amin'ireo fifanakalozana tao amin'ny ifeng.com :
>Weirdo_Hai：Iriko raha miala ny tsena shinoa avy hatrany ireo orinasan-devoly toy ny KFC.
易 租易购_以租代购_以租代售：Mbola azo atao ve ny misakafo ao amin'ny KFC? Voaporofo ankehitriny fa arahan'ireo orinasa vahiny maro rantsana mpanao sakafo ireo ny fomba fanaontsika. Any amin'ny firenena iray izay misy fanarahamaso kely sy tena nofinofy ny hisian'ny fanasaziana ny fitondrantena tsy manara-dalàna, dia afaka mitsapatsapa ny lalàna misy daholo ireo orinasa.
璐 瑶谣：Akatony daholo ireny toerampisakafoana vahiny mampihinankinam-poana ireny. Manokàfa ‘pizzerias’ shinoa marobe eto an-toerana, hanome vintana misimisy kokoa ireo tsy an'asa mba hahazo asa izany.
g 老三：Feno eny rehetra eny ireo akoho misy poizina, aiza ireo manampahefana mpanaramaso eto amintsika ? Orinasa fotsiny ihany ny KFC. Tokony ho apetrany ve ny sampanasa manokana ao aminy hanaramaso ny kalitao, ny fitsirihana ary ny fanibohana ?
木小兔向前冲：Ny hazo avo halan-drivotra. Raha tsy azo atao na dia ny mihinana fotsiny ao amin'ny KFC aza, azo atao ve ny hahatoky ireo toeram-pisakafoana hafa ?
秦 大勇Y：Azo antoka ve ireo akoho hitantsika eny an-tsena ? Ireo shinoa mpamatsy no tokony hotsiniana. Tsy azo itokisana ny governemanta raha resaka fanarahamaso ny fiarovana ara-tsakafo, mino ve ianareo hoe tsy mahafantatra izany fomba fanao izay ireo manampahefana ireo?
Ny mpisera sasantsasany namorona ny hoe teorian'ny firaisana tsikombakomba momba ilay tantara ratsy [zh]:
即 墨雅泰侯屹：EFa 10 taona raha kely indrindra no nisy tao Shina ny fiompiana akoho terena hitombo haingana ataon'ny orinasa KFC. Nahoana ny fantsom-pahitalavitra CCTV no izao vao mba mandefa vaovao ? Hitan'ny sasany ny valiny : ny dokambarotra. Miomana ny hampitsahatra ny dokambarotra ataony ao amin'ny fantsona CCTV ny orinasa KFC. Toy izany no nanjo ny orinasa Shuanghui, nialohan'ny nanajanonana ny dokambarotra natao tao amin'ny CCTV. Tsy nisy torohay momba ireo olan'ny maha-ara-pahasalamana ny sakafo tao amin'io orinasa io. Vantany vao natsahatr'ilay orinasa ny dokambarotra nataony tao amin'ny CCTV, nipoaka ny tantara ratsy.
楚奇文kevin￼：Raha ny marina, ireo akoho fotsy volo, raha lazaina amin'ny fomba hafa dia ireo akoho natosika halaky be ny fitomboany, dia tsiambaratelo tsara hidy efa hatramin'ny taona marobe. Ompiana amin'izany fomba izany ny akoho any rehetra any manerana izao tontolo izao. Ny fanelezana ireny vaovao ireny dia natao mba hanalàna baraka ny Yum! Hanabantiana sy hamelezana ny fanjakana imperialy amerikàna. Vao tsy ela akory, nataon'ny governemanta amerikana izay nanahirana ireo kaompania shinoa, jereo ireo tantara ratsy manodidina ny CNPC, Huawei ary ny ZTE Corporation. Mazava loatra fa resaka valifaty ilay izy.